चुट्किलाः शेरेले हाकिमसंग चाउमिन अर्डर गरेपछि - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः शेरेले हाकिमसंग चाउमिन अर्डर गरेपछि
शेरको एउटा अफिसमा जागिर लाग्यो । पहिलो दिन अफिस गएछ। दिनभरी काम गरेपछी खाजा खाने समय भएछ ।
शेरेले फोन गरेर खाजा अडर गर्दै भनेछ:- ए भाई यहाँ एक प्लेट चाउमिन र दुधको चिया ल्याउ त छिट्टै ।
तर फोन गल्तिले गर्दा त्यही अफिसको एक्सटेनसानमा पुगेछ।
याे पनि पढ्नुस चुट्किलाः यदी उ मेरो भईनन् भने...
शेरेः थाहा छैन
उताबाट:- म यो अफिसको M.D. हुँ?
शेरे:- तलाई थाहा छ, को सगँ कुरा गर्दैछस्?
उताबाट:- थाहा छैन ।
शेरे:-त्यसो भने ठिकै छ। (त्यती भनेर शेरेले फोन ढ्याक्क राखेछ।)
याे पनि पढ्नुस चुट्किलाः शेरेले दुइ पटक बिवाह गर्दा पनि.....